AppShopper inomira kushanda zvachose | Ndinobva mac
AppShopper inomira kushanda zvachose
Zvinogoneka kuti vazhinji venyu hamuzive nezvekuvapo kweichi peji rewebhu asi pachezvangu ndanga ndichiona zvinopihwa mashandisiro mariri kwemakore. Uye
Iyi webhusaiti iyo yaishandira iyo
makore mangani yakapa mukana wekutsvaga zvakadzikiswa kunyorera, kwenguva yakati wandei. Mupfungwa iyi, chinhu chakanakisa nezve webhusaiti yacho ndechekuti zvaive zvakajeka uye pamusoro pazvo zvese zvaipa mashandisiro emarudzi ese uye kune ese Apple mapuratifomu.
AppShopper bvumira mushandisi kuwana Mac, iPhone, iPad maapuro pamutengo uye yaive yechimanje panguva iyoyo. Zvinoita sekunge izvozvi zvave pasi kwemazuva mashoma uye isu hatina chokwadi chekuti ichashanda zvekare zvirinani munguva pfupi.
Parizvino peji rewebhu rinoratidza chikwangwani mukati ikozvino inotitora isu kuenda kuApple's inozivikanwa nhau webhusaiti, MacRumors, saka isu tave kuda kugutsikana kuti saiti huru iyi yakashandiswa kutsvaga mamwe maapplication ekutaurirana achasiiwa asina kushandiswa.
Mazhinji ekunyorera kwandakaisa nhasi paMac yangu akawanikwa nekuda kweichi peji rewebhu uye ndinogona kutaura kuti yakandichengetera imwe mari pavari. Kunongova nemasaiti mashoma asara iwe kwaunogona kuwana kunyorera kwakarongedzwa nemutengo uye nezvishoma zvakaderedzwa, izvo zvinoita kuti zvinyanye kutinetsa kushandisa mikana. Tinovimba AppShopper inoshanda zvakare munguva pfupi asi zvinotora kanopfuura vhiki rakadzimwa saka tinopokana kuti ino saiti ichashanda zvakare munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » AppShopper inomira kushanda zvachose
Audacity Anopomerwa Kuunganidza Mushandisi Dhata Kugadzira "Spyware"
Maitiro ekusiya macOS Monterey yeruzhinji beta